(588 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ... ဆိုဒ်များအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဗီယက်နမ်မှကစားသမားများလက်ခံ
ဗီယက်နမ်မှကစားသမားများကိုလက်ခံပြီးအရည်အသွေးမြင့်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောဂိမ်းများကိုကမ်းလှမ်းသောအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဆိုဒ်များစာရင်းကိုကြည့်ပါ။ ဤနေရာတွင် slot machine မှလောင်းကစားရုံဂိမ်းများအထိဖျော်ဖြေမှုအမျိုးမျိုးကို NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming နှင့်အခြားသူများမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသောဖျော်ဖြေမှုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းလောင်းကစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုလည်းဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှကစားသမားများရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းအရောင်းမြှင့်တင်မှုများ၊ အပိုဆုကြေးများနှင့်ငွေပေးချေမှုစနစ်များကိုသတိပြုမိရန်။
ထိပ်တန်း 10 ဗီယကျနမျအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
မကြာသေးမီကဗီယက်နမ်သည်ခရီးသွား the ည့်သည်များ၏စိတ် ၀ င်စားမှုကိုနှစ်သက်သောနိုင်ငံများတွင်မပါဝင်ပါ။ သို့သော်ယနေ့အခြေအနေမှာသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပြီး၊ လက်ရှိဗီယက်နမ်သည်၎င်း၏လျင်မြန်စွာကြီးထွားနေသောစီးပွားရေးနှင့်အတူခိုင်မာသောကြီးထွားမှုကိုပြသသောအားဖြင့်အားလုံးအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာသည်။
တိုင်းပြည်နှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိလိုသူများ၏လှပမှုနှင့်လှပမှုသည်သိသိသာသာတိုးပွားလာသည်။ guests ည့်သည်များတွင်လောင်းကစားဖျော်ဖြေရေးပရိသတ်အများအပြားရှိသည်။ ထို့ကြောင့်လောင်းကစားရုံတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်ဘတ်ဂျက်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ခရီးသွား of ည့်သည်များထပ်မံ ၀ င်ရောက်လာခြင်းအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။
ယခုဗီယက်နမ်အာဏာပိုင်များသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောကြိုးပမ်းမှုများကိုပြုလုပ်နေသည်။ လောင်းကစားရုံများနှင့်ဖဲချပ်ယဉ်ကျေးမှုအားကစားများတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်နောက်ထပ်တွန်းအားကိုရရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံ၏ guests ည့်သည်များအားအာရှအာရှ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မြင်ကွင်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရုံသာမကလောင်းကစားဖျော်ဖြေရေးအတွက်အချိန်များစွာလည်းရရှိစေလိမ့်မည်။ သို့သော်ဒေသခံများအတွက်ဤအနားယူရာလမ်းသည်မရရှိနိုင်ပါ
သို့သော် ကျနော်တို့ကဗီယက်နမ်လောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းကနေပြီးပြည့်စုံသောအထီးကျန်မပွောနိုငျ ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစိုးရကတားမြစ်ချက်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချပေးခဲ့ပြီးမကြာသေးမီကခွင့်ပြုထားသောနိုင်ငံသားများသည်အွန်လိုင်းကာစီနိုတွင်ကစားခွင့်ရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုအဖြေတစ်ခုဖြစ်နေသေးသော်လည်းကစားသမားအများစုကယခုသူတို့သည်ချက်ချင်းလက်ငင်းလက်လှမ်းမီနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ လောလောဆယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်လိုင်းခွဲ ၇ လိုင်းကိုလိုင်စင်ချထားသည်။
အဓိကအကြောင်းအရာကိုဆက်လက်ပြောကြားသည်။ မကြာမီအနာဂတ်တွင် MGM Resorts International ၏ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ မကြာမီနောင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အကြီးစားမြေယာလောင်းကစားရုံဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဒီဖန်တီးမှုကိုဖန်တီးသူကနေဒါကုမ္ပဏီ Asian Coast Development ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ လောင်းကစားရုံကိုလာရောက်လည်ပတ်သူများကိုနိုင်ငံခြားသား only ည့်သည်များသာခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
ဗီယက်နမ်၏အဓိကအပန်းဖြေစခန်းများဖြစ်သောတောင်ပိုင်းဒေသများ၏စွမ်းအားကိုအထူးဂရုပြုပြီးနိုင်ငံ၏တက်ကြွသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပြုလုပ်နေသည်။ ဒီနေရာကိုကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်စေရန်နည်းလမ်းသစ်များရှာဖွေနေသည်။ ပြီးတော့လောင်းကစားရုံကသူတို့ထဲကတစ်ခုပါ။ လောင်းကစားရုံများမှ visitors ည့်သည်အရေအတွက်တိုးပွားလာနိုင်ခြင်းသည်လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ၊ သူတို့ထဲတွင်လောင်းကစားဖျော်ဖြေရေးပရိသတ်များစွာပါဝင်သည်။
တကယ်တော့, ဗီယက်နမ်အတွင်းပထမဆုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏အသွင်အပြင်တစ်မှတ်တိုင်ဖြစ်ရပ်ခဲ့ တ ဦး တည်းပင် gimmick တစ်မျိုးပြောပေလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့လောင်းကစားရုံတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတွင်းမှာအချိန်အတော်ကြာပိတ်ပင်ထားခဲ့ပြီး၊ အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံတွေကိုတော့ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။ လောင်းကစားရုံလောင်းကစားလုပ်စဉ်အတွင်းဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်၎င်း၏ထိရောက်မှုနှင့်မှန်ကန်မှုကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှ Guest ည့်သည်ဒေတာစီးဆင်းမှုစာရင်းဇယားသိသိသာသာကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် the ည့်ဝတ်ကျေပွန်ခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းခြင်းနှင့်ကမ်းခြေကြီးများသာမကကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်လည်းဆက်စပ်သည်။
ဗီယက်နမ်အာဏာပိုင်များသည်ဘီးကိုအသစ်တီထွင်ရန်မလိုပါ၊ သို့သော်တရုတ်ကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောလမ်းလျှောက်မှုလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းနေပြီဖြစ်သည်။ ကာစီနိုသာမကအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး (ဟိုတယ်များ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အခြားအရာများစွာ) ကိုပါတည်ဆောက်ပေးသည့်ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်သဘောတူညီချက်များကိုသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်သူတို့သည်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်လောင်းကစားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ဖြေရှင်းနည်းသည်မှန်ကန်ရုံသာမကပညာရှိပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်? လောင်းကစားရုံတစ်ခုဖွင့်ရန်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလိုအပ်သည်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုအိမ်မှာရှာတွေ့ခြင်းသည်လက်တွေ့မကျပါ။ ထိုကဲ့သို့သောမြို့တော်သေးရိုးရှင်းစွာမရှိပါ။ ကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဆင့်လည်းရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအခြေအနေတွေပြောင်းသွားနိုင်ပြီးဒေသတွင်းကုမ္ပဏီတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လောင်းကစားရုံတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။
ယနေ့ဗီယက်နမ်လောင်းကစားသမားများသည်ခရီးသွားareasရိယာခြောက်ခုကိုလိုချင်သည်။ ဒီနံပါတ်ကဒီနေ့အလုပ်လုပ်နေတယ်။ အပန်းဖြေအနားယူရုံသာမကကာစီနိုလောင်းကစားပွဲတစ်ခုတွင်ပါကစားရန်မှာကမ္ဘာ့နိုင်ငံများစွာမှနိုင်ငံသားများဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ဖောက်သည်များအဆက်မပြတ်စီးဆင်းနေခြင်းကြောင့်တရုတ်နယ်စပ်အနီးတွင်ရှိသောအကြီးဆုံးဂိမ်းစက်ရုံများသည်
မြေအောက်လောင်းကစားရုံများသည်တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေသည်ဟုဆိုခြင်းသည်မှား၏။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာသူတို့ကအတိအကျရာဇဝတ်မှုတစ်ခုတိုးလာသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ပြည်နယ်ဘဏ္treာရေးအတွက်အခွန်မှအပိုတစ်ပြားမှာအလွန်အမင်းဝေးလံလှပေသည်။ လက်ရှိတွင်ဗီယက်နမ်၏အာရှနိုင်ငံများအားလုံး - ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်အလုံခြုံဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းတရားမ ၀ င်ဂိမ်းကစားခြင်းခန်းမများအားတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုပြုလုပ်နေသည်။
အခြေအနေကိုဖြေရှင်းရန်အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအာဏာပိုင်များသည်နိုင်ငံသားများကိုအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားခြင်းကိုခွင့်ပြုခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲသူတို့ကစားကွင်းသို့လောင်းကစားနှင့်လောင်းကစားခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စကိုအစိုးရအသိုင်းအဝိုင်းများမှာတက်ကြွစွာဆွေးနွေးနေပြီးဗီယက်နမ် ၀ န်ကြီးချုပ်ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ သို့သော်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဗီယက်နမ် - သင်အပန်းဖြေရုံသာမကပိုက်ဆံပေါ်တွင်လောင်းကစားရုံတွင်ကစားရန်မွေ့လျော်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
လောင်းကစားခြင်း၏အောင်မြင်သောဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အနာဂတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အော်ပရေတာများအတွက်သင့်လျော်သောအခြေအနေများဖန်တီးခြင်းမရှိဘဲလမ်းလျှောက်။ စကားမပြောနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်တိုင်းပြည်၏အာဏာကိုကောင်းစွာသိသောကြောင့်ဗီယက်နမ်ရှိရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုတတ်နိုင်သမျှသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်၊ နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားများကိုမမေ့ဘဲကြိုးစားပါ။
ကုမ္ပဏီအသစ်များကိုဆွဲဆောင်ရန်ဥပဒေပြုရေးတွင်လောင်းကစားလုပ်ငန်းများအပေါ်အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လောင်းကစားရုံဖွင့်လှစ်ခြင်း (ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံအထိ) အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်လိုအပ်သောအနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုသိသိသာသာလျှော့ချပြီးလောင်းကစားအတွက်အခွန်အပေါ် ၀ င်ငွေ၏ ၃၅% အထိလျှော့ချလိုက်သည်။
ဤအဆင့်များသည်အာဏာပိုင်များသည်လောင်းကစားရုံအော်ပရေတာများအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဖန်တီးရန်မျှော်လင့်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ထိုကဲ့သို့သောဥပဒေတွင်အခွန်အကောက်များနှင့်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုနှစ်ဆလျှော့ချခဲ့သည်။ ယခုအချိန်၌ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအသစ်များဖွင့်လှစ်ရန်မျှော်လင့်နိုင်ပြီးတိုင်းပြည်တွင်အရင်းအနှီးထပ်မံမြှင့်တင်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ဒေသခံပြည်သူများသည်ဥပဒေအရလောင်းကစားခြင်းကိုခွင့်ပြုထားသော်လည်းအသက်နှင့်လစဉ် ၀ င်ငွေပမာဏအပေါ်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။
မကြာသေးမီကဗီယက်နမ်ဟူသောစကားလုံးသည်စစ်ပွဲနှင့်အမေရိကကိုအစဉ်သတိရသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အချိန်တွေကြာကြာမပျံသန်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့်နှစ်တွေကုန်လွန်သွားပြီးအာရှနိုင်ငံတွေဟာအရင်နဲ့မတူတော့ဘူး။ နောက်ပြန်လှည့်သောလယ်ယာမြေအခြေအနေမှဗီယက်နမ်သည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းအတိုင်းအတာဖြင့်ကြီးထွားလာသောမျှတသောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကိုပြောင်းလဲလာတာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဗီယက်နမ်သည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ထိုထူးခြားသောဒေသနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လို။ တိုင်းပြည်သို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ visitors ည့်သည်များစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်အာဏာပိုင်များသည်လောင်းကစားခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်၊ များစွာလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်မှာသဘာဝပင်။ စင်စစ်အားဖြင့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအကြား“ စီးပွားရေးကိုအပျော်အပါးနှင့်ပေါင်းစပ်။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်” ပေါင်းစပ်သွားနိုင်မည့်လှပသောနှင့်သမိုင်းဝင်နေရာများမှတစ်ဆင့် gu ည့်လမ်းညွှန်ခရီးစဉ်ကို ၀ မ်းသာအားရပျော်ရွှင်စွာကစားမည့်လောင်းကစားသမားများနှင့်တွေ့ရလိမ့်မည်။ လောင်းကစားဝိုင်းဗီယက်နမ်တက်ကြွစွာဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။
လောင်းကစားလုပ်ငန်းသည် ၀ င်ငွေကောင်းတစ်ခုအမြဲရရှိသည်။ အာဏာပိုင်များသည်တိုင်းပြည်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းကိုတရားဝင်ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါက၎င်းတို့သည်သူကိုယ်တိုင်အခြားအကျိုးအမြတ်များစွာရှိသော ၀ င်ငွေများကိုဒေသန္တရဘတ်ဂျက်သို့ပေးလိမ့်မည်။ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတည်ဆောက်ခြင်းသည်ငွေစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည့်ကျန်ဗီယက်နမ်နှင့်အခြားအုပ်ချုပ်သူများနှင့်မတူပါ။ အခြားတိုင်းပြည်များ၏အတွေ့အကြုံများအရအာရှထူးခြားဆန်းပြားသည့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုလောင်းကစားရုံတည်ရှိခြင်းသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များပိုမိုများပြားလာသည်။ ထို့ကြောင့်ဟိုတယ်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးရှုပ်ထွေးသောနေရာအများဆုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားဂိမ်းများကိုလူကြိုက်များခြင်းတို့သည်ခရီးသွား tour ည့်သည်များအားဗီယက်နမ်နှင့်အာဏာပိုင်များထံလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းမှအပြည့်အဝခံစားခွင့်ရရှိစေလိမ့်မည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးဘဏ္uryာရေးအတွက် ၀ င်ငွေတိုးနိုင်သည်။ ဒီဟာကပဲဒေသခံတွေပဲ၊ လောင်းကစားလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။
ကာစီနိုလောင်းကစားပွဲမှာဗီယက်နမ်ကစားခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာကိုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအတော်လေးသာယာနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကာစီနိုလောင်းကစားရုံကိုလာဖို့အကြောင်းပြောနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် virtual မဟုတ်ပါဘူး။ မကြာသေးမီကဗီယက်နမ်အာဏာပိုင်များသည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးဒေသခံလောင်းကစားသမားများအားအွန်လိုင်းကာစီနိုကစားရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ကစားသမားများကစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပြီးပိတ်ပင်မှုကိုလုံးဝရုပ်သိမ်းသွားမည်။ ထို့နောက်သင်ကြည့်မည်၊ လောင်းကစားခန်းမကိုသွားနိုင်သည်။ ယခုအချိန်အထိအွန်လိုင်းလောင်းကစားအော်ပရေတာ (၇) ခု၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သင့်သည်။
နိုင်ငံခြားခရီးသွားည့်သည်များအတွက်မဝေးတော့သည့်အနာဂတ်တွင်၎င်းသည်အမေရိကန်ကုမ္မဏီ Resorts International MGM ကိုပိုင်ဆိုင်မည့်လောင်းကစားရုံကြီးတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်နေသည်။ စီမံကိန်းကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ဤအဆောက်အ ဦ ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကနေဒါကုမ္ပဏီ Asian Coast Development ကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ ငါတို့ရေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းကိုလက်လှမ်းမီခြင်းသည်ခေတ်သစ်နည်းပညာ၏အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကစားကွင်းသည်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်သာဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်သည်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုငြင်းပယ်ထားသည်
ဗီယက်နမ်သည်သမိုင်းဝင်အထိမ်းအမှတ်များနှင့်အမေရိကန် - ဗီယက်နမ်ပconflictိပက္ခ၏အမှတ်အသားများမှ လွဲ၍ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကိုပြသရန်တစ်ခုခုရှိသည်။ တောင်ပိုင်းဒေသများရှိဤပြည်နယ်သေးသေးလေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည့်အလှဆုံးအပန်းဖြေစခန်းများရှိပြီး၊ ထို့ကြောင့်အာဏာပိုင်များသည်၎င်းတို့၏နိုင်ငံအတွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လောင်းကစားခြင်းများအတွက်အမျိုးမျိုးသောအဆိုပြုချက်များကိုပြုလုပ်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ဇိမ်ခံဟိုတယ်များနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်အခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကိုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်သော်လည်းလောင်းကစားရုံတည်ဆောက်ခြင်းကိုလည်းအထူးအာရုံစိုက်သည်။ အနားယူပြီးတဲ့နောက်လူတွေဟာအပန်းဖြေမှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ချင်ကြပါတယ်။ လောင်းကစားခန်းမထဲကိုတစ်ခါမှမရောက်ဖူးတဲ့သူတွေတောင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံကိုလာဖို့သွေးဆောင်တာကိုရှောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့လောင်းကစားသမားတွေအကြောင်းဘာမှပြောစရာဘာမှမရှိဘူး။
ကာစီနိုလောင်းကစားရုံဖွင့်လှစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်ဗီယက်နမ်အာဏာပိုင်များသည်အလွန်မှန်ကန်သော၊ လောင်းကစားခြင်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်တားမြစ်ထားသောကြောင့်“ ရိုးရာ” နိုင်ငံတွင်အလွန်ထူးဆန်းပြီးအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိန်းဂဏန်းများအရကမ္ဘာတဝှမ်းမှခရီးသွား significantly ည့်သည်များသိသိသာသာတိုးများလာခြင်းကြောင့်ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဟိုတယ်အားလုံးရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကမ်းခြေ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝနှင့်ထူးခြားသောသဘာ ၀ အနေဖြင့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကိုဆွဲဆောင်သောထူးကဲသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဒါပေမယ့်ဗီယက်နမ်မှာကာစီနိုလောင်းကစားရုံတွေပေါ်ပေါက်လာတာဟာသိသာထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္playedကနေပါဝင်ခဲ့တယ်
အခြားအာရှနိုင်ငံများရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလက်ခံပြီးတရုတ်မှာအလားတူပဲဗီယက်နမ်အာဏာပိုင်များကကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူပိုများလာအောင်ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမယ်ဆိုတာဥပမာကောင်းတစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးဘတ်ဂျက်ငွေသားစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်အသစ်တစ်ခုနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုတီထွင်ရမှာလဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဗီယက်နမ်မှာဆောက်လုပ်ရေးနဲ့လောင်းကစား ၀ န်ဆောင်မှုတွေမှာအတွေ့အကြုံမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတည်ဆောက်မှုကိုသာမကဘဲကပ်လျက်အားလုံးကကူညီနိုင်တဲ့ကြီးမားပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီအမြောက်အများရဲ့ကမ္ဘာမှာလိုအပ်တယ်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ဟိုတယ်များ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ ဖက်ရှင်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဘားများစသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဤကုမ္ပဏီအတွက်ကန်ထရိုက်တာများအနေဖြင့်ဗီယက်နမ်ရှိလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်ခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ရေးထားသည့်အတိုင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင်ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည့်ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများဖန်တီးမှုတွင်အထူးကုများသည်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမဟုတ်ပါ။ ပိုက်ဆံလည်းများတယ်။ ဒါကြောင့်အမြင်အာရုံချို့တဲ့သောအုပ်စိုးရှင်များနှင့်နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ ငွေမည်မျှလိုအပ်သည်၊ အလုပ်သမားမည်မျှကုန်ကျသည်ကိုစိတ်ကူး။ ပင်ဟိုတယ်များ၊ လောင်းကစားရုံများ၊ ရေကူးကန်များ၊ ရေပူစမ်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အခြားအရာများနှင့်အတူအနည်းဆုံးဖျော်ဖြေရေးစင်တာတစ်ခုဖွင့်ရန်ပင်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်ဤအချက်ကနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများမှသာတိုင်းပြည်အတွင်း၌ထိုကဲ့သို့သောအဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ရန်အမြဲတမ်းပါဝင်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးမှာအာဏာပိုင်များသည်ပိုမိုမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကိုလက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီးဒေသခံများအားသူတို့၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်သင်လိုအပ်သည့်“ လှည့်ကွက်” များအားလုံးကိုလေ့ကျင့်ပေးလိမ့်မည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မကြာမီဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ,
ယနေ့တွင်ပင်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များသည် guests ည့်သည်များကိုလက်ခံရန်အပြည့်အဝအဆင်သင့်ရှိပြီး၊ အရသာနှင့်အလိုဆန္ဒအားလုံးအတွက်ခရီးသွား offer ည့်သည်များကိုသာမကကာစီနိုလောင်းကစားရုံသို့လည်ပတ်ရန်နှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများကိုပျော်မွေ့ရန်အခွင့်အလမ်းကိုလည်းပေးသည်။ ပြီးတော့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကနေအနားယူဖို့အတော်လေးစျေးပေါချင်တဲ့ကစားသမားတွေဟာဗီယက်နမ်ကိုသွားချင်နေကြပြီ။ ထို့အပြင်၊ အကြီးဆုံးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးလောင်းကစားရုံအချို့သည်တရုတ်နယ်စပ်နှင့်နီးသည်။ ဒီအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများမှကစားသမားများကအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီး၊
ကြာမြင့်စွာကတည်းကသိထားပြီးဖြစ်သောတားမြစ်ထားသောအသီးသည်ချိုမြိန်သည်။ ၎င်းသည်ဗီယက်နမ်ရှိလောင်းကစားလုပ်ငန်းသည်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ တားမြစ်ချက်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်များရှိလင့်ကစားတရားမဝင်လောင်းကစားရုံအရေအတွက်မှာများပြားသည်။
တိုင်းပြည်အတွင်းရှိတရားမ ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများအလုံအလောက်ရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့သည်တိုင်းပြည်၏ဘတ်ဂျက်ကိုမထိခိုက်စေဘဲ၊ ခရီးသွား an ည့်သည်များမည်မျှထိခိုက်ပျက်စီးသည်၊ အကြောင်းမှာထိုအဖွဲ့အစည်းများသည်ရာဇ ၀ တ်သားများနှင့်သူခိုးများ၏မွေးမြူရေးနေရာများဖြစ်သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့သည်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည်တရားမဝင်လောင်းကစားခြင်းကိုတားဆီးရန်ကြိုးစားနေသည်။ ဤအချက်ကိုယခုအချိန်တွင်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည်အလုံခြုံဆုံးခရီးသွား destination ည့်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်ဟူသောအချက်ကိုသုံးသပ်နိုင်သည်။ သို့သော်တရားမ ၀ င်လောင်းကစားခြင်းမှရရှိသော ၀ င်ငွေသည်ဒေသန္တရဘတ်ဂျက်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်နှင့်ဥပမာအားဖြင့်တူညီသောလူမှုရေးပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်အနည်းငယ်သာအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်
အာဏာပိုင်များကဗီယက်နမ်သို့အလည်အပတ်ခရီးမြေအောက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်နိုင်ငံ၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံကိုခွင့်ပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီကိစ္စကိုမကြာမီဒေသခံများအဘို့အလောင်းကစားခြင်းကိုတားမြစ်ချက်အပြည့်အဝရုပ်သိမ်းခြင်းကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်နှင့်သူတို့သာမန်ကာစီနိုထဲမှာသူတို့ရဲ့ "အသွေး" ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်အကြောင်း, မိတ်ဆွေများကဝိုင်းဂိမ်းစားပွဲမှာညနေခင်း။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာပိုင်တွေကအရမ်းလေးနက်ပြီးဗီယက်နမ် ၀ န်ကြီးချုပ်ကသူ့ကိုအထူးထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိနိုင်ငံခြားခရီးသွား only ည့်သည်များသာသာယာလှပသောဟိုတယ်များတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်ကာစီနိုလောင်းကစားပွဲများအကြား၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာအမျိုးမျိုးသို့သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်း၊
မိမိတို့တိုင်းပြည်ရှိလောင်းကစားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အောင်မြင်ရန်အတွက်စုံတွဲတစ်တွဲကိုပထမဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တာများကိုဖိတ်ခေါ်ရုံသာမကအရာအားလုံးဆောက်လုပ်ပြီးသည်အထိ ၀ င်ငွေတိုးပွားလာသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လုံလောက်သည်ကိုလူတိုင်းသိကြသည်။ ဗီယက်နမ်အာဏာပိုင်များသည်၎င်းကိုအခြားအရာများထက်ပိုမိုနားလည်သည်။ ထို့ကြောင့်အလားအလာရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အကျိုးစီးပွားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာစီးပွားရေးကိုမေ့သွားမည့်ဥပဒေမူဘောင်တစ်ခုကိုစတင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒီအခြေစိုက်စခန်း၏အဓိကအချက်တစ်ခုမှာလောင်းကစားအခွန်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ တိုးပွားလာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန်လောင်းကစားရုံတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏသည်ဒေါ်လာသုံးဘီလီယံသို့လျှော့ချပြီးအခွန်အပေါ်အတိုးနှုန်းက ၀ င်ငွေ၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချသွားသည် လောင်းကစား။
ဒီအစီအမံတွေအားလုံးကိုလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေမှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတွေကြားပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပိုများလာအောင်လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါ ကျင်းပသည့်နံပါတ်များကိုကြည့်။ အခွန်နှင့်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ထက်ဝက်နီးပါးရှိသည်။ ဤဆန်းသစ်တီထွင်မှုများသည်အခြားနိုင်ငံများမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ဗီယက်နမ်အာဏာပိုင်များကသူတို့၏စခန်းရှိလောင်းကစားရုံအရေအတွက်တိုးပွားလာခြင်းကြောင့်အစိုးရဘဏ္uryာရေးသို့ပိုမို ၀ င်ရောက်လာနိုင်သည်။ ဥပဒေပြုသူများကလောင်းကစားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းသွားပြီးအချို့နေထိုင်သူများသည်လောင်းကစားခန်းမများသို့သွားရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြသည်။ သို့သော်“ ပိုက်ဆံအိတ်အထူ” နှင့်ကစားသမားများ၏အသက်အရွယ်အရကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။
ကျနော်တို့ကအထက်ကနေကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, ဗီယကျနမျအာဏာပိုင်များတိုင်းပြည်အတွက်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အလေးအနက်ထားစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏တိုင်းပြည်ဟာသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးလုံလုံလောက်လောက်အဆင့်မြင့်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်နှင့်အာရှလောင်းကစားဝိုင်းတစ်ဦးကိုခံထိုက်သောကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာသည်။
0.1 ထိပ်တန်း 10 ဗီယကျနမျအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
အေးကြောင်လောင်းကစားရုံအဘို့အဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေ codes တွေကို